VaMugabe Voshorerwa Kuda Kuregerera Vari Kuita Mhirizhonga
Bato reMDC pamwe nemamwe masangano anorirwa kodzero dzevanhu aramba kutambira mashoko emutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, ekuti vanhu vakapara mhosva dzine chekuita nemhirizhong vakanganwirwe mhosva idzi.
VaMugabe vakataura mashoko aya kumarinda eHeroes Acre neMuvhuro pazuva rekucherechedza magamba. Mamwe makurukota ehurumende audza Studio7 kuti VaMugabe vanenge vaida kusimbisa pfungwa dzebato ravo iro rakaramba mudare remakurukota svondo rapera kuti mauto nevasori vari kuramba vachiita mhirizhonga vasungwe.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Muzvare Thabitha Khumalo, vanoti VaMugabe chavari kuita kuudza vatsigiri vavo kuti varambe vachirova vanovapikisa. Vati havatambire kurudziro yakadai.
VaOkay Machisa ndivo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa kuZimRights.VaMachisa vanoti havatambire kurudziro yekuti vanhu vasasungwe, nekuti kuita izvi kunenge kuri kutyora kodzero dzevanhu vakakanganisirwa.
Munyika muri kuramba muchiitika mhirizhonga yakanyanya panguva iyo hurumende iri kuyedza kunyora bumbiro idzva remitemo.
Mhirizhonga iyi inonzi iri kukonzerwa zvikuru nevatsigiri veZanu PF, vasori, mauto pamwe nemapurisa.